Taabid Cabdi “Waa nasiib darro kale in 4 sanno kadib Qaraxii Soobe uusan jirin qorshe Amni” – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Taabid Cabdi “Waa nasiib darro kale in 4 sanno kadib Qaraxii Soobe uusan jirin qorshe Amni”
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii Magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay xusuustiisii Maanta oo kale afar sanno kahor qaraxii khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay Isgoyska Soobe ee Caasimadda dalka ee Muqdisho.
Taabid Cabdi oo Qoraal dheer soo saaray ayaa waxaa uu sheegay in 14-October sanadkii 2017-kii ay tahay maalin xusuus iyo xusid mudan oo aan marnaba qalbiyada shacabka Soomaaliyeed ka go’ayn, isla markaana reebtay murugo aan laga soo kaban karin.
Taabid ayaa tilmaamay in isaga shaqsiyan ay u tahay tahay mahadho xanuun badan, maadaama Isgoyska Soobe (14-October) uu isla goobta xiligaas maray wax ka yar 10 daqiiqo, uuna arkay nolosha halkaas ka jirtay qaraxa ka hor iyo markii uu qaraxa dhacay kadib.
Dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Isgoyska Soobe ee gaarayay 500 oo qof ayuu Alle uga baryay in u naxariisto, sidoo kalena Alle uga baryay inuu qalbi qaboojiyo idilkood intii ay saameysay musiibadaas dhacday.
Taabid Cabdi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in 4 sanno, kadib uusan jirin qorshe amni oo la taaban karo, kaas oo lagu xaqiijin karo badqabka iyo ka hortagga khatarraha, xiliyada qaarkood ka dhaca Magaalada Muqdisho oo waxyeelo kasoo gaarto shacabka.
14October waa maalin xusuus iyo xusid mudan oo aan marnaba qalbiyadeena ka go’ayn, naguna reebtay murugo aan laga soo kaban karin, iyadoo wili dadka qaarkood aysan nolol iyo geeri midna ku heyn dadkoodii 4 sanno kadib.
Waxaan qabay, wilina aaminsanahay in qof kasta oo mas’uuliyaddii amni ee ummadda dayacay maalintii 14October2017 lagu sameeyo baaritaan bulshada u furan (14OctoberInquiry) muddada ay doonto ha nagu qaadato balse aanan sina loo duugin, si ay ummaddu caddaalad u hesho. Iyadoo tii Rabbina baaqi tahay maalinta aanan waxba qarsoomeyn ee qiyaamaha.
Dowladda Federaalka iyo Midowga Afrika oo Maanta kulan ku yeelanaya Muqdisho
Nin ku hubeysan qaanso iyo falaar oo Dad ku dilay Dal ku yaalla Yurub